विचार Archives - नमस्ते खबर
विभिन्न व्यक्तिहरुले राखेका बिचारहरू सम्बन्धी का लेखहरू
आमनिर्वाचन भएको दुई महिना हुन लाग्यो । तर, बाम गठबन्धनले लगभग दुई तिहाई सिट जित्दा समेत नयाँ सरकार बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले पनि मनमौजी निर्णय गरिबसेका छन् । चुनाब हार्दा पनि उनलाई नैतिकताले कँही छोएको देखिन्न । बरु बाम गठबन्धन फुटाएर कांग्रेस र माओवादी मिलाएर सरकार बनाउन उनले जोडबल गरिरहेका छन् । यद्यपि उनका प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन् । किनकी एमालेसँग पार्टी नै एकीकरण गर्छौँ भनेर चुनाव जितेको हुनाले माओवादीलाई कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा जनमतको अपमान हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ । अहिलेको परिस्थितिमा माओवादी…
प्रा.डा. नोवलकिशोर राईको नजरमा गोर्खा भर्ती र गोर्खा आन्दोलन
म आफैँ लाहुरे नभए पनि म ब्रिटिस लाहुरे परिवारकै सदस्य हुँ । मेरो पिताजी पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९३० मा भर्ती हुनुभएको थियो । मेरा दुई जना काका पनि ब्रिटिस लाहुरे नै हुनुहुन्थ्यो । पछि एक जना काका जापानको युद्धबन्दीमा पर्नुभयो भने अर्को जर्मनीको युद्धबन्दी हुनुप¥यो । मेरो जेठा दाइ र एक जना भाइ र मामा पनि ब्रिटिस लाहुरे नै हुनुहुन्थ्यो । यस मानेमा म आफू लाहुरे नभए पनि लाहुरेहरूको सुखदुःख, पीडा, चालचलन, जीवनशैली र उनीहरूले भोग्नुपरेका विभेदहरूसँग म अत्यन्त परिचित छु । प्रा.डा. नोवलकिशोर राई मेरा पिताजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अंग्रेज…
प्रहरीमा सँधै यस्तो किन ?
January 18, 2018 joes_limbu joes_limbu
तत्कालिन एआईजी रामकाजी बान्तवा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको डीआईजी हुँदा सँगै काम गरेका एक प्रहरी अधिकृतले सुनाउँथे– जब उपत्यका प्रहरी कार्यालय भृकुटीमण्डप अगाडि तत्कालिन महेन्द्र पुलिस क्लवमा नै थियो, विक्रम सम्वत २०५१ साल ताका तत्कालिन गृहमन्त्री केपी ओली महेन्द्र पुलिस कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गरेछन् । सो खबर लिएर ती डीएसपी दोँडिदै उपत्यका प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) रामकाजी बान्तवाको कार्यकक्षमा पुगेर हतारिँदै गृहमन्त्री क्लवमा आएको कुरा एक सासमै सुनाएछन् । बान्तवाले आफ्नै स्वभावमा शान्तसँग भनेछन्, ‘के गरौँ त म ? खुट्टा समात्न जाउँ ? आफ्नै काम होला, आए काम सक्छन्, जान्छन् ।’ यस्ता दृढ…
वाम एकतामा ‘प्रचण्ड’को हुटहुटी र एमालेभित्र अझै संशय, एकता चाहनेले बुझ्नै पर्ने कुरा
January 17, 2018 joes_limbu joes_limbu
प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा पाउनुपर्ने केही छैन, जबकि उनले धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले अझै ठूलो उचाईमा पुग्नुपर्ने केही छैन, एउटा शीर्ष उचाईं उनले प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, उनका अगाडि उनले भने झैं सिँगो नेपाली समाजको जडता बाँकी छ । २००६ सालमा पुष्पलालहरुले साँचेको र पछि जनयुद्दमा बगेको रगतको मूल्य चुकाउन अझै बाँकी छ । भीष्म थापा/काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले असोज यता हजारौंपटक एउटा कुरा दोहो¥याएका छन् । आफ्नो चुनावी सभामा होस् या औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा होस्, प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेको एउटै कुरा छ– हामीले पूल…
५१ वर्षमै मृत्युवरण गरेका पृथ्वीनारायणका भित्री कुरा ‘खान, खस, बाहुन, मगर, गुरुङ र ठकुरी बलिया सिपाही’
January 11, 2018 joes_limbu joes_limbu
पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वको टिष्टासम्म आधुनिक नेपालको साँध तयार पारिसकेका थिए । पश्चिममा बाँकी थियो । बाइसे, चौबीसे राज्यहरु भित्र पनि सामन्त, दान र बकस दिएका राज्यहरु थिए । आधुनिक नेपालको सरहद बाहिर ठूला साम्राज्यहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । डचहरु आइरहेका थिए । र स्पेनिस, डच र फ्रेन्चहरुबीच लडाईं चलिरहेको थियो । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली मुगलहरु थिए, त्यसबेला । उनीहरुलाई परास्त गर्दै नाविक शक्तिले जित्दै थियो । नाविक शक्ति भनेको युरोपली मुलुक थिए । नेपालमा मुगल अथवा टर्किसहरुले गर्ने जस्तो शक्तिको अभ्यास खसहरुले थालेका थिए । तिनै खसहरुका उत्तराधिकारीका रुपमा…
January 10, 2018 joes_limbu joes_limbu
देशमा कानुन हराएको बेला मैले तपाईंलाई पत्र लेख्न बाहेक केहि गर्न सकिन । गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । गोबिन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेदेखि आजकल दिमागले के के सोच्दैछ के के ! यहि बीचमा हरिबंश आचार्यलाई सम्झें, नेताहरुलाई सम्झें अनि प्रधान न्यायाधीशलाई सम्झें । हरिबंश आचार्य देशका गहना हुन् । उनले आफ्नो पुस्तकमा चीना हराएको कुरा बताएका छन् । आहा ! चीना हराउँदा कति फाईदा रहेछ है । यहि बेला बामदेव गौतमलाई सम्झें । बाम गठबन्धनलाई यहाँसम्म ल्याउन महत्पूर्ण भूमिका खेले तर उनकै भोट हरायो । यहाँ यस्तै छ, केहि…
पति नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मृत्युपछि बिक्षिप्त बनेकी स्वेता खड्का फेरि लयमा फर्किन थालेसँगै उनको अर्को विहेको चर्चा शुरु हुन थालेको छ । लामो प्रेमसम्बन्धलाई विवहामा परिणत गरेलगत्तै एकल बनेकी खड्कको विवहाबारे आजकल मिडियामा चर्चा हुन थालेको छ । पतिको मृत्युपछि पहिलोपटक नयाँ चलचित्र ‘कान्छी’ प्रदर्शनको तयारीमा रहेकी खड्का अर्को विवहा गर्ने मनस्थितीमा रहेको समाचार अनलाईन पोर्टलहरुमा आउन थालेको छ । घर परिवार र साथीभाइबाट विवाहका लागि दबाब आएपछि खड्का विवाह गर्ने सोचमा पुगेको यस्ता समाचारहरुमा उल्लेख भएपनि उनले को सँग विवहा गदैंछन भन्ने बारेमा भने अहिलेसम्म खुलेको छैन । काभ्रेको…
नयाँ सरकार बन्नु अगावै बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनमा दरार आउने लक्षण देखा पर्न सुरू गर्यो
December 24, 2017 joes_limbu joes_limbu
नयाँ सरकार बन्नु अगावै बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनमा दरार आउने र त्यसबाट निर्वाचनमा भोगेको पराजयको पीडा कम हुने अपेक्षा कांग्रेस नेतृत्वले राखेको आभास गर्न थालिएको छ । भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत मतदाताले आगामी पाँच वर्षका लागि मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएका छन् । तर, निर्वाचन भएको झण्डै तीन सातामा पनि आम नेपालीको यो चाहना पूरा हुने गरी मुलुकको राजनीति अघि बढ्न सकेको छैन । बरु संविधानका केही अस्पष्टतामा टेकेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय पद्धतिको बर्खिलाफमा उभिंदै ताजा जनादेशको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । विडम्बना, यसको अगुवाई मुलुकको…
लेखेर राख्नुहोस् प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दैनन् गरीहाले पनि फेरी पार्टी फुटाईहाल्छन्!
December 22, 2017 joes_limbu joes_limbu
नख्खु जेलमा बस्दा मैले एकदुई पटक किशुनजीलाई देखें। यो २०२५ सालको कुरा हो। त्यससमय म नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष थिएँ र रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिलसिलामा जेल बस्दा मैले किशुनजीलाई भेटेको हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो– म हिन्दुस्तानपनि जान्नँ, हतियारपनि उठाउँदिन, सुवर्ण शम्शेरको प्रस्तावपनि स्वीकार गर्दिनँ। एकदिन पचास हजार नेपालीले उठेर दरबार घेर्छन्, म त्यसदिनको प्रतिक्षामा धैर्यपूर्वक बस्छु। कृष्णप्रसाद भट्टराई अलिकति अध्यात्मिक भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। तपस्या गर्छुपनि भन्नुहुन्थ्यो। जनताको साधना गर्छु भन्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहिँ। किशुनजीले त्यसरी भनेको सुन्ने प्रारम्भिक विद्यार्थी युवकमध्ये मपनि थिएँ। विपीले सशस्त्र संघर्षको आह्वान गरिसक्नु भएको थियो, सुवर्ण…
वाम गठबन्धनको सरकारले जनचाहाना बमोजिम नै चमत्कार गर्ला त ? मतदाताले उत्सुक्ताको साथा दिएको मत को कदर होला अव ?
महानिर्वाचन २०७४ मा वाम गठबन्धनले दिग्विजय हासिल गर्‍यो । अब सबैको जिज्ञासा छ, के अब चमत्कार होला ? केही कुरा खोतल्ने प्रयास गरौं । चमत्कार हुनका लागि ठोस आधारहरु देखिनुपर्‍यो । चुनाव परिणाम र वामपन्थीहरुको लगभग दुई तिहाई बहुमतको परिस्थितिलाई ठोस आधारको रुपमा व्याख्या गरिंदैछ । तर चुनाव परिणामका विभिन्न आयामहरुलाई नकेलाई यही रुपमा व्याख्या गर्न कठिन छ । पहिलो कुरा यो चुनाव परिणाम डर र अविश्वासको उपज हो भन्दा आश्चर्य लाग्ला । तर नाङ्गो वास्तविकता यही देखिन्छ । पहाडमा वाम गठबन्धनको दिग्विजय मधेशको मनोविज्ञानको प्रतिक्रियास्वरुप आएको हो भन्दा ठिकै…